Kenya: UNHCR 3 bilood haku rarto qaxootiga Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 12 April 2015 12 April 2015
Mareeg.com: Madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya, William Ruto ayaa hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR u qabtay iney muddo 3 bilood ah qaxootiga Soomaalida uga rarto xeryaha Dhadhaab.
Warka kasoo yeeray William Ruto ayaa yimid kadib markii todobaadkii hore Alshabaab in ka badan 140 qof ku dileen jaamacadda Gaarisa.
William Ruto ayaa ku hanjabay in Kenya xoog ku rari doonto qaxootiga Soomaalida ah, haddii UNHCR ay ku rari weyso mudada 3-da bilood ah.
Madaxweyne ku xigeenka Kenya ayaa ku dooday in madaxda UNHCR ay kala hadlee sidii loo qaxootiga Soomaalida ah dib loogu celin lahaa dalkooda.
“Haddii UNHCR ay 3 bilood ku rari weyso qaxootiga annaga u keeni doona basas iyo gaadiidka xamuulka ah” ayuu yiri Ruto.
Wuxuu sheegay William Ruto in dalka Kenya is badeli doonto kadib weerarkii Gaarisa ee dhiiga badan ku daatay, wuxuuna yiri “Qaabka uu Maraykanku isu bedelay kadib weerarkii 9/11 ayay Kenya isu bedeli doontaa kadib weerarkii Garissa”.
Willian Ruto ayaa dhan kale tilmaamay in darbiga laga dhisayo soohdinta Soomaaliya iyo Kenya uu bilowday.
Afhayeenka UNHCR ee dalka Kenya, Emmanuel Nyabera ayaa sheegay inaysan ka helin dowlada Kenya codsi rasmi ah oo qaxootiga Soomaalida ah looga rarayo xeryaha Dhadhaab.
Kenya ayaa weerarkii Gaarisa kadib caro kala dul dhacday dadka Soomaalida ah, waxeyna xirtay xawaalado badan, iyadoo qaxootiga Dhadhaabna ku eedeysay in deegaankooda lagu tababaro Alshabaab.
Muqdisho: Maalinta milateriga Somalia oo la xusayo